तपाईंले संगत गरेका केटी कस्ता छन् ? जान्नुहोस् यी ९ तथ्य Artha daily : Best Online Nepali news portal
धर्म र सस्कृति
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्यजन्तु आर्षण
2019-06-26 . 04:37:53
काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्यायो साढे १५ अर्बको बजेट
प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘गलबन्दी च्यातियो …’ गीतको चर्चा
उत्कृष्ट वर्ष खेलाडीको मनोनयनमा पारस र सोमपालसहित ५ जना
राजनीतिक तहमा टुङ्ग्याउन खोज्दा नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्न सकेन : गृहमन्त्री थापा
अर्थ डेली प्रकाशित: २०७५-११-२२ गते
तपाईंले संगत गरेका केटी कस्ता छन् ? जान्नुहोस् यी ९ तथ्य
जीवन साथीको महत्व जीवनमा धेरै हुन्छ । असल जीवनसाथीले असल जीवनकै रुपरेखा निर्धारण गर्दछ भने खराब जीवन साथीले खराव रुप रेखा निर्धारणमा सहयोग गर्दछन् । यस्ता तमाम घटना तपाईंले आफ्नो जीवनमा र वरिपरिबाट सिक्नुभएकै होला । सामान्य मान्छे मात्रै होइन जीवन साथीको भूमिका ठूला मान्छेमा पनि पर्दछ ।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ओबामाले श्रीमती मिसेलको कारणले आफ्नो जीवनमा धेरै परिवर्तन आएको बताएका थिए ।अहिले श्रीमान गुमाएकी नायिक श्वेता खड्काले श्रीमान् श्रीकृष्ण श्रेष्ठकै प्रोत्साहानको कारण आफू समाज सेवामा लाग्न थालेको बताउँछिन् । धुर्मुस सुन्तलीको जोडिले त लामो समयदेखि सहकार्य गरिरहेकै छ । अहिले समाजसेवामा पनि जम्दै छन् ।
संसारमा ठूला धनाढ्य र गर्व गर्न लायक मानिसहरुले आफ्नो श्रीमतीको भूमिकालाई उल्लेख गर्ने गर्दछन् । महान श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई दास बेनर राजा बनाउने र आफू पनि रानी बन्ने मानसिकता राख्दछे भन्ने त लोकोक्तिनै छ । तर खराब श्रीमती पर्यो भने चौपटै हुन्छ । आफूले भविष्यमा पाउने जीवन साथीको कस्ती हुन्छे वा हुन्छ भन्ने कुरा उसको केही आनिबानीले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ ।
केटीको सन्दर्भमा लामो अनुसन्धान पश्चात विद्वानहरुले विभिन्न धारणा बनाएका छन् । साथै उनीहरुले यस्तो बानी व्होरा हुने केटीको पछि नलाग्न अनुरोध गरेका छन् । दुई दम्पतीको सम्बन्ध सुमधुर हुनबाट रोक्नको लागि विभिन्न बानीले भूमिका निर्धारण गरेका छन् । अनुसार निम्न आनीबानीको कारण सम्बन्धहरु विग्रीन्छन् ।
१. आफुले भनेको सबै ठिक अरुले भनेको बेठिक भन्ने प्रवृतिस् केही महिलाहरु यस्ता हुन्छन, जो अरुको कुरा सुन्न नै चाहँदैनन् । यस्ता बर्गका केटीहरुलाई के लाग्छ भने उनीहरुलाई दुनियाँमा थाहा नभएको कुरा केही छैन र उ जस्तो सर्बज्ञ दोस्रो व्यक्ति यो समाजमा छैन । उनीहरुको यही सोचाइको कारण उनीहरु सधै अरुमाथि राज्य गर्न अग्रसर हुन्छन् । विज्ञहरुका अनुसार सुरुवातमै विना हिच्किचावट कुनै पुरुषमाथि एउटा महिला हाबी हुने तरिकाले प्रस्तुत भइन् भने उनीबाट तत्काल सतर्क हुनु पर्छ ।
२. शंकालु केटीः कतिपय केटीहरु अत्यन्तै शंकालु हुन्छन् । यस्ता प्रकृतिका केटीहरु के चाहन्छन् भने उसको केटा साथीले सबै खालका गतिविधी उसामु छर्लङ्ग पार्नु पर्छ । कतिसम्म भने उसको केटा साथीले हरेक गतिविधि उसका अगाडि दुरुस्त राखेन भने यस्ता खालका केटीहरु फायर हुन पुग्छन् र वमलाई विर्साउने गरी विष्पोट हुन्छन् । यस्ता केटीसँगको सम्बन्ध कतिसम्म घाडो बन्न जान्छ भने तपाईले आफ्ना चिनेको साथीहरुसँग पनि निर्धक्क कुरा गर्न पाउनु हुन्न । कुनै केटीसाथीहरुसँग कुरा गर्नु भयो भने यस्ता केटीहरुले तत्काल तपाइलाई स्पष्टिकरण दिन बाध्य पारिहाल्छन ।
३. बुझ्नै नसकिने खालका केटीहरुस् कतिपय केटीहरु यस्ता हुन्छन् कि उनीहरको बारेमा बुझ्न अत्यन्तै कठिन हुन्छ । उनीहरु केही विषयमा राखेको जिज्ञासामा ‘हो’ भन्ने जवाफ दिइरहेका हुन्छन् । तर बास्तवमा उनीहरुलाई भित्र भित्रै ति कुराहरु ‘होइन’ भन्ने लागिरहेको हुन्छ ।
४. म जे गर्छु ठिक गर्छु प्रवृतिः यस्ता प्रकृतिका केटीहरु कति सम्म घाडा हुन्छन् भने उनीहरुलाई मन परेको कुरा सबैलाई मन पर्छ भन्ने ठान्छन् । अनि सुरु भइहाल्छ उनीहरुको अतिचार । उसलाई मन परेको खाना, काम लगायत सबै उसका रोजाइहरु तपाइलाई मन पर्नै पर्ने भए पछि अनि पर्दैन त फसाद । यही कारण हो धेरैको जीवनमा असमझदारी बढ्दै गएर घरबार विग्रिएको छ ।
५. डाहा गर्ने केटीहरुः यदि तपाईको संगतमा रहेकी केटी साथी कसैको इष्र्या बढी गरिरहेकी हुन्छीन् भने तपाईले अहिले नै सोच्नुस् कि उनी खतरनाक किसिमकी केटी हुन् । यस्ता केटीसँग तपाईको जीवन चलाउन निकै नै कठिन हुनेछ, किनकी यस्ता प्रकृतिका केटीहरु आफुले केही गर्नु भन्दा पनि अरुको आलोचना र इष्र्या गर्नमा नै बढी रमाउँछन् ।
भनाइ नै छ नि,‘अरुको इष्र्या गर्नेहरु सधै इष्र्या नै गरिहेका हुन्छन् ।’ यस्ता केटीहरु आफ्नो केटा साथीले कुनै केटी साथीसँग कुरा मात्र गरे पनि डाहले भुतुक्कै हुन्छन् । तिनलाई लाग्छ–अव उसले मलाई छाडेर उसँग लाग्यो भने त म समाप्त नै हुन्छु ।
६. परनिर्भर तथा आत्मविश्वासविहिन केटीहरुः– कतिपय केटीहरु केटा साथी वा श्रीमानले नै सबै कुरा गरिहाल्छन, मैले केही जिम्वेवारी नलिए पनि हुन्छ भन्ने खालका हुन्छन् । यस्ता केटीहरु पुर्ण रुपमा अरुमा परनिर्भर हुन्छन् र सानो दुःखमा पनि आकासै खसे जस्तो गरी आत्तिन्छन् । यस्ता केटीहरुले आफ्नो श्रीमान बाहेक जीवनमा अरु केही नै सोचेका नै हुँदैनन् । उनीहरुलाई आफुले जीवनमा केही गर्नु पर्छ भन्ने पनि लागेको हुँदैन । बस् श्रीमान र उसको प्रेमीबाट मुखबाट ‘म तिमीलाई माया गर्छु’ भन्ने बाक्य आए पुग्छ । यति मात्र होइन, यस्ता केटीहरुले तपाईको हरेक गतिविधीमाथि पनि उत्तिकै निगरानी राखिरहेका हुन्छन् , प्रहरीले चोर र डाँकाको गस्ती गरेजस्तै गरी । यदि त्यस्तासँग तपाईको सम्बन्ध जोडिन पुग्यो भने भुलेर पनि यस्तासँग सम्बन्ध अगाडि नबढाउनु किनकी यस्तासँगको दिर्घकालिन सम्बन्ध सुमधुर हुने सम्भावना अत्यन्त क्षिण हुन्छ ।
७. आमाबाबु भन्दा माथि उठेर सोच्न नसक्ने केटीः कोही केटीहरु आफ्ना आमाबाबुको खटन पटन भन्दा बाहिर आउन नै सक्दैनन् । उनीहरुलाई सानो निर्णय लिन पनि बाबु आमाविना कठिन प्रायः जस्तै हुन्छ । ‘मेरो त ड्याड र ममले नै सबै कुरा गर्नु हुन्छ, यो त मलाई थाहा छैन बुबा आमासँग नै एक पटक सोध्नु पर्छ’ जस्ता कुरा गर्ने केटीहरु पनि झुर नै हुन्छन्, व्यवस्थापकिय क्षेत्रमा ।
उनीहरुमा आफैले केही गर्नु पर्छ भन्ने बानीको साथै व्यवहारिक र व्यवस्थापकिय क्षमता पनि विकास भएको हुँदैन । त्यसैले यस्ता केटी पनि तपाईको रोजाइमा नपरेकै बेस हुन्छ । किन भने सानो सानो कामका लागी पनि, सानो दुःखमा पनि, सानो खुसीमा पनि उनीहरु ठाउँमा वस्न सक्दैनन् । आमा–वुवाको वयान जति गर्नुस्, विहे भएपछि २५–२६ वर्षको उमेर वा जिवन काट्न जाने उही श्रीमानसँग हो । जति दुःख परेपनि जति सुःख भएपनि उही श्रीमानसँग हो सवै सुःख दुःख साट्ने । तपाईले युवतिहरुले आफ्नो वुवा आमालाई निकै माया गर्नुहुन्छ, वुवा आमाले पनि निकै मायाँ गर्नुहुन्छ ।
तर एउटा कुरा युवतिहरुले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने छोरी जन्मीएपछि विवाहको वारेमा सोचीहालेका हुन्छन् र विहे गर्ने उमेर भएपछि विवाह गर्दिन पाए ठुक्क हुन्थ्यो भन्ने सोचीरहेका हुन्छन् । तपाईलाई मायाँ गर्ने र तपाईले मायाँ गर्ने युवकनै युवतिहरुका लागी राम्रो हुन सक्छ ।
८. अरु सबै सुखी छन्, म मात्र दुःखी छुस् कतिपय केटीहरु कति असन्तोसी प्रकृतिका हुन्छन् भने उनीहरु कहिल्यै पनि खुसी रहन नै सक्दैनन् । अरु सबै सुखी छन् तर म भने दुःखी छु भन्ने भावना त्यस्ता केटीहरुमा आइरहन्छ । फलानोले त्यत्रो पैसा कमायो, फस्ट डिभिजनमा डिग्रि पास गर्यो, उसको छोरोले यस्तो गर्यो तर मैले केही गर्न सकिन, उसकी श्रीमती अमेरीका पुगी, अस्टे«लिया पुगेर सेल्फी हानेर तस्विर फेसवुकमा राखी । उ कति धेरै खुसीपुर्वक बाँचेको छ तर मैले भने कहिल्यै खुसीपुर्वक बाच्न सकिन भन्ने असन्तोकी प्रकृतिका केटीहरुसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुुर हुन सक्दैन किनकी असन्तोकी सधै दुःखी रहने त प्रकृतिको नियम नै हो ।
९. मनको कुरा खुलेर नगर्ने केटी स् कतिपय केटीहरु मनका कुरा खुलेर गर्दैनन् । उनीहरु आफ्ना सबै क्रियाकलाप आफ्नो केटा साथीलाई जानकारी नै नहोस् जस्तो सोचाइ राख्छन् । आफ्नो मोवाइलमा आएको फोन, मेसेज, भेटघाट, खर्च जस्ता कुराहरुमा यदि कुनै केटी पारदर्शी छैनन् भने त्यस्ता केटीलाई अहिले नै विदाई गरिहाल्नोस् किनकी यस्ता केटीले तपाईको जीवनमा कहिल्यै खुसी ल्याउन सक्दिनन् । यस्ता प्रकृतिका केटीबाट बढी खर्च गर्ने, परपुरुषहरुसँग लाग्ने जस्ता धेरै सम्भावना रहने विज्ञहरुको ठहर गरेका छन् ।
मानिसको सबैभन्दा ठूलो शत्रु क्रोध नियन्त्रण गर्ने ५ तरिका जान्नुहोस् !
समाजमा सम्मानित र राम्रो व्यक्ति कहलिनको लागि मानिसले धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि ख्याल नगरी नहुन..
टिकटकको लत लागेकी महिलाले टिकटकमै किन गरिन् लाइभ आत्महत्या ? कारण यस्तो छ
श्रीमानसँग सामान्य विवाद भएपछि भारतमा एक महिलाले टिकटकमा लाइभ आत्महत्या गरेकी छिन् । भारत तमिलनाडुस्थित अरियालुरमा..
सुहागरात मनाउने राउटेको अचम्म तरिका ,हेर्नुहोस कसरी मनाउछन् !
शहर–बजारका युवायुवती विभिन्न पार्क तथा मन्दिरहरूमा गफिँदै गरेका भेटिन्छन् । तर, जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै..
गर्मी भयो ? शीतलता प्राप्त गर्न यसो गर्नुहोस्!
गर्मीयाम सुरु भएको छ । गर्मी मौसम कतिपयका लागि निकै पिडादायी पनि हुने गर्दछ । गर्मीमा कसरी शीतलता प्राप्ति गर..
सम्पादक: विजय हमाल
प्रेस काउन्सिल दर्ता न.१५०१
सूचना बिभाग दर्ता न. ११५८
Copyright © 2019 All right reserved to भैरवी मिडिया प्रालि Site By: Sobiztrend Technology.